Mamolavola sary dokam-barotra amin'ny Photoshop tsikelikely | Famoronana an-tserasera
Mamolavola sary dokam-barotra ao Photoshop Zavatra iray izay atao anio tsy tapaka noho ny tombony lehibe atolotry ny programa an'ny sary retouching faran'izay tsara izay mamela antsika hanao ny zava-drehetra toa ny misy antsika mpanao majia nomerika. Ny kalitaon'ny sary azontsika dia miankina amin'ny haavontsika miaraka amin'ny programa sy ny tanjontsika amin'izany sary izany. Imbetsaka isika no hitady famolavolana tsotra kokoa ary fotoana hafa izay sarotra sy be pitsiny kokoa.
Ao amin'io lahatsoratra namorona a sary foronina kely for Netflix, ity tabilao ity dia noforonina ho isan'ny a lahatsoratra amin'ny fomba famoronana dokambarotra mahomby, amin'ity voalohany ity lahatsoratra mifantoka amin'ny tapany teôria isika ary izao dia hifantoka amin'ilay ampahany azo ampiharina.
Handeha isika mamorona ny sary izay azontsika jerena any ambony, tahaka ny ahitantsika ny fiteny sary izay nampiasainay ho an'ny sary fanaovana dokam-barotra dia ny sary, akaiky (PP) manodidina maso misy faribolana maizina ary hatsarana am-bava est simulate a fahatsapana manjombona. Na dia toa sarotra atao aza izany dia mora ihany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mahazo sary, azontsika atao ny mampiasa ny iray Internet na alaivo mivantana ny sary. Ny filamatra amin'ireo tranga ireo dia ny fampiasana a Internet manamboatra kely sary an-tsary ny zavatra tiantsika hatao sy ny fomba anaovantsika azy, amin'ity sary ity dia ho hitantsika a fanakaikezana ny hevitsika farany. Faka sary foana tsy maintsy kasaina hanaovana azy tsara, ny fampiasana sary an-tanana amin'ny tanana na fitaovana nomerika fanampiana be foana io.
Izahay dia mitadysary io
Miomana izahay fivoriana an-tsary (raha mila ny fitaovantsika manokana isika)
Manokatra izahay ny sarintsika ao Photoshop
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika Photoshop es mamorona antontan-taratasy vaovao. Amin'ity tranga ity dia namorona antontan-taratasy misy refy vitsivitsy izahay, saingy azonao atao ny mametraka ny fandrefesana amin'ny fandrefesana hafa mifanaraka amin'ny hevitrao. Ny filamatra dia hajao ny fanapahan-kevitra, ny mode modely (RGB raha ho an'ny CMYK dizitaly raha fanontana) sy ny mombamomba ny loko. Izahay dia mamorona rakitra miaraka amina anarana hiasa amin'ny fomba milamina indrindra ary mankamin'ny dingana manaraka.
Alohan'ny hanovana ny refin'ny endritsika dia tsara torohevitra avadiho ho Zavatra Inteligent, Amin'izany fomba izany dia hialantsika io sarintsika io very kalitao amin'ny fanitsiana ho avy ataontsika amin'izany.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia sokafy ny sarinay ary ampitao amin'ilay antontan-taratasy vaovao. Imbetsaka ny sarinay tsy mifanaraka amin'ny refy amin'ny antontan-taratasy no tokony hataontsika habe ny sarinay amin'ny Photoshop. ny manova refy avy amin'ny sarinay no tsindrio ny hitsin-dàlana fifehezana + T na mankanesa any amin'ny kiheba ambony an'ny Photoshop fanovana + fanovana maimaim-poana. Manitsy tsikelikely ny sarintsika isika ary mamela azy io araka ny itiavantsika azy.
Aorian'ny fanitsiana ny sary, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia manomboka amin'ny Famerenana sary.
Hiara-milalao amin'ireto fitaovana Photoshop manaraka ireto izahay:
Fiovan'ny fanitsiana miolakolaka / ampitomboina fomba maody
Hianarantsika ireto hevitra manaraka ireto:
Manamaizina sary miolakolaka amin'ny sary
Miasa amin'ny sosona fanitsiana
Asio aloka teboka manokana
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny famoronana a curves fanitsiana sosona hanomboka hanamaizina ny sarinay.
1 1. Mamorona sosona fanitsiana miolakolaka
2 2.Ny fanitsiana fanamafisam-peo
3 3-Asio alokaloka teboka miaraka amina sosona fanitsiana miolakolaka amin'ny fomba maro
1. Mamorona sosona fanitsiana miolakolaka
Tsindrio ny kisary ambany avy amin'ny faritra sosona ary safidio ny safidy curves, misy sosona vaovao hamboarina ho azy eo ambonin'ilay sary tany am-boalohany.
Manova ny teboka ao amin'ny sosona izahay fiolahana fanitsiana eo am-pijerena ny sary hahazoana ny mikasika tadiavintsika.
2.Ny fanitsiana fanamafisam-peo
Mamorona a fanitsiana sosona mafy hampihenana ny loko mahavoky ny sarinay, amin'ity famolavolana ity dia mitady hamorona sary miaraka izahay feo manjavozavo hahatonga azy ho zavatra manjombona kokoa.
Manova ny isan-jaton'ny loko araka ny itiavantsika azy, mitady ny hitaratra an'io tanjona nokasainay teo aloha io. Raha vantany vao manana an'ity isika dia hampihatra aloka manokana.
3-Asio alokaloka teboka miaraka amina sosona fanitsiana miolakolaka amin'ny fomba maro
Mamorona a normal layer fanitsiana miolakolaka ary avy eo ao amin'ny faritry ny cape style apetrakay ny safidy multiply mode, Rehefa manao an'io isika dia hihamaizina ny endritsika, hialana amin'izany dia tsindrio ny hitsin-dàlana fifehezana + I.
Aorian'ny fanerena ity hitsin-dàlana ity dia ho tahaka ny tamin'ny voalohany ny sary, izay efa vita Photoshop dia ny handao ny vokany tsy hita maso ho antsika aoriana manapa-kevitra amin'ny faritra tianay hanovana.
Ankehitriny rehefa voaomana ny sosona fanitsiana antsika, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manova ny masontsivana ahafahan'ny borosintsika mamorona aloka (boribory maizina) amin'ny sary araka izay azo atao. Vitantsika izany jereo ny sary faribolana maizina ao Internet mba hahafahantsika mahazo hevitra momba ny tena toetrany.
Ny zavatra mahazatra dia ny fampidinana ny hamafana, hamafin'ny hery ary hery arak'izay azo atao hanalokalofana tsikelikely ny sary sy hanaovana ny valiny ho azo tanterahina araka izay azo atao. Raha tsindrio ny X lakile Podemos borosy mivadika ka hamafana fa tsy mametraka aloka.
Raha vantany vao manana an'io vonona io isika dia afaka miroso amin'ny teboka farany an'ny antsika sary momba ny dokam-barotra: mampihatra sary famantarana sy lahatsoratra. Ity fizarana ity dia tsy voatery arakaraka izay tadiavintsika, amin'ity tranga ity dia ny fampiharana ny sary famantarana ny zavatra nataontsika Netflix manaraka kely ny azy tsipika famolavolana.
Amin'ity dingana farany nampiasainay ity ny fitaovana mitovy noho ny tamin'ny dingana teo aloha: manova, opacity ary mameno.
Mihabetsaka na latsaka haingana fa tsy very kalitao sy famoronana Namorona sary dokam-barotra izay mifanaraka tsara amin'ny tanjona napetraka teo amin'ny sehatry ny atidoha izahay. Photoshop Izy io dia fitaovana tsara indrindra ahafahana manao touch-up be dia be sary mahavariana, ny tsiambaratelo mifehy azy dia ny fampiasana azy tsy tapaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Mamolavola sary dokam-barotra amin'ny Photoshop tsikelikely
Miala tsiny amin'ny typo ao amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra, nanao doka aho fa tsy manao doka. Hadisoana kely rehefa mampakatra ny iray amin'ireo sary.
Manantena aho fa tianao ilay lahatsoratra!